नभुलौं पृथ्वीनारायण शाहलाई – तहल्का खबर.कम
बाइसे चौबीसे राज्यलाई एकीकृत गरेर सिङ्गो राज्य नेपाल बनाउने पृथ्वीनारायण शाहको पुस २७ गते पृथ्वी जयन्ती हो ।
गणतन्त्र आउनु भन्दा पहिले राष्ट्रिय एकताको प्रतिक पृथ्वीनारायण शाह भनेर राष्ट्रिय रूपमा नै धुमधामका साथ उहाँको जन्म जयन्ती मनाइन्थ्यो । तर, आजभोली राष्ट्रनायक पृथ्वीनारायण शाहको जयन्ती र उहाँका कृतिलाई सम्झना गर्नु त कहाँ हो कहाँ उहाँका बिरुद्धमा नकरात्मक आलोचना हुने गरेको पाईन्छ ।
अत्याधिक चुनौतिका बाबजुत कम स्रोत साधनको बाबजुत हामीलाई विश्वमा गर्व गरेर बीर नेपाली भनेर गर्व गर्ने बाटो दिएका पृथ्वीनारायण शाहको नकारात्मक टिप्पणी हुनु निकै दुर्भाग्य छ ।
अग्रेज सेनाको लात नखाएकाहरू पृथ्वीनारायण शाहको आलोचना गर्ने गरेका छन् । हामीलाई नेपाली भनेर चिनाउने पृथ्वीनारायण शाह प्रति सम्मान गर्ने दिन कहिले आउँछ, त्यो भन्ने अवस्था अझै छैन । तर, सबैले स्मरण के गर्नैपर्छ भने अहिलेसम्म उहाँको योगदान नभएको भए ति बाईसे चौबीसे राज्य कुन राज्यमा बिलाई सक्थे । सायद त्यसबेला गोर्खा, लमजुङ, तनहुँ ,भक्तपुर आदि सबै हिन्दूराज्यहरूको अवस्था नाजुक थियो र अग्रेजले निकै आँखा गाडेका थिए ।
नेपालको एकीकरण गर्ने उदेश्यबाट नै प्रेरित भएर पृथ्वीनारायण शाहले बनारसबाट हात हतियार बनाउने र मर्मत गर्न मुसलमान कालीगढ, केही हातहतियार र मुसलमान योद्धाहरू समेत गोरखा ल्याएका थिए भन्ने तथ्य पढ्न पाईन्छ । यस्ता युग पुरूषको तेजोबध गर्ने लह लहैमा लागेर नेपालीको आफ्नो राष्ट्रियताको धरोहर, राष्ट्रय निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको अपमान गर्नु दुर्भाग्य पुर्ण छ ।
कतीले हाम्रो पुर्णेको नाक काटेको भनेर पृथ्वीनारायण शाहलाई किन मान्ने भन्ने गर्छन् । तर, त्यो जमानामा धोकेबाज र युद्ध छोडेर भाग्ने नामर्द को नाक काटिन्थ्यो यो सजाय हो । शत्रुहरूलाई गोली हानेर वा हात हतियारले हानेर मारिन्थ्यो भनेर पढ्न पाईन्छ । पृथ्वीनारायण शाहलाई गलत भनेर भन्नेलाई प्रश्न ? बिगतको १० वर्षे जनयुद्धमा नेपालभित्र कति शिक्षक आम मानिसको गर्धन शिर काटियो । त्यो बर्बरतालाई शीरमा बोकेर केही ठेकेदार विद्वानले पृथ्वी नारायणलाई मात्र खेदो खनेको देख्दा दया लागेर आउँछ ।
त्यति मात्र होइन उनका भनाईहरू पनि यस्ता छन् जो पृथ्वीनारायण शाहलाई एकल, क्षेत्रीय, जातीय भनेर आरोप लगाउनेलाई पृथ्वीनारायण शाहले प्रष्ट भन्नुभको थियो,“मेरा साना दुखःले आज्र्याको मुलुक होइन सबै जातको फूलबारी हो सबैलाई चेतना भया ।’’
साथै उहाँले यो फूलबारी छोटाबडा सबै चारजात छत्तीस बर्णले यसलाई स्याहार गर्नु भन्नु भएको छ । सुशासन नभए र भ्रष्टाचार भए देश उभो लाग्दैन भन्ने उहाँलाई प्रष्ट थाहा थियो । त्यसमा उहाँले भन्नुभको छ, ‘अन्याय मुलुकमा हुन नदिनु नियानिसाप बिगार्ने भनेको घुष दिने र लिने दुबै देशको सत्रु हुन ।’
त्यस्तै धान खेतीमा ‘प्लटिङ’ गरिन्छ, बिकासको मोडेल धेरैलाई मन परेको छैन यस्तो अवस्था आउला भन्ने सायद पूर्व अनूमान भएरै होला उहाँले भन्नु भको छ “खानी भएको ठाउँमा गाउँ भए पनि गाउँ अरू जग्गा सारीकन पनि खानी चलाउनु गह्रौँ बनेका जग्गामा घर भए पनि अरू जग्गामा सारी कुलो काटि खेत बनाई आवाद गर्नु ।
हाम्रा छीमेकीसँगको सम्बन्धमा उहाँले प्रष्ट भन्नु भाको छ । यो हाम्रो नेपाल २ ढुङ्गा बीचको तरूल हो । चीनसँग बादशाह जस्तो ठूलो घाहा राख्नु तर त्यो चतुर छ जाइ कटक नगर्नु झिकी कटक गर्नु उहाँले भन्नु भको छ ।
हाल देशमा समृद्धिको चर्चा छ । तर, कसरी समृद्धि आउँछ अन्योलमा छन देश हाँक्नेहररु । यसबारे पृथ्वीनारायणले भन्नु भाको छ । शासन चलाउनेलाई उहाँको अर्ती छ, आफ्नो देशको जिनसी जडिबुटी देश लैजानु र नगद पैसा राख्नु प्रजा मोटा भया राष्ट्र बलियो रहन्छ ।
पहिचानको बारेमा सबैको चासो छ संस्कृति मासिँदै छ यसबारे उहाँले भन्नु भएको छ । उहाँले आफ्नो आफ्नो जाती बिशेष कर्म गर्नु बन्देज नगर्नु भन्नु भएको छ । देश कसरी चलाउने अहिलेका नेतृत्वकर्ताले पृथ्वीनारायण शाहको उपदेश पढेर अघि बढे अवस्य पनि देशमा परिवर्तन आउँछ ।
हामी नेपालीले बिदेशी लेलिन कार्लमाक्सको जन्मदिन मनाउने, भारतीय महात्मा गान्धीको जन्म दिन मनाउने । तर, नेपाल देश बनाउने पृथ्वीनारायण शाहलाई नसम्झने ? हिजो युद्ध जित्न नसक्दा अग्रेजहरूले लगाएको झुटो भ्रमको पछि नलागौं ।
अमेरिकीहरू जर्ज वासिंङटनलाई मान्छन् । चिनियाँहरू माओसेतुङलाई मान्छन । भारतीयहरु गान्धीलाई मान्छन् हामीले कसलाई मान्ने ? बीपीलाई मानौँ काग्रेस भन्छन । पुष्पलाललाई मानौं कम्युनिष्ट भन्छन् । पृथ्वीनारायण शाहलाई मानौ राजावादी भन्छन् । मान्ने कसलाई त हामीले ?
सबैले राष्ट्र पिता पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती मनाऔं । त्यति मात्र होइन पृथ्वीनारायण शाह हुन या फाल्गुनन्द गुरू यस्ता बिभूतिको सम्झना गरी रहांै । जय नेपाल । जय बिभूति ।